Baarlamaanka Puntland oo fadhi deg deg ah loogu yeeray saaka & Gudoomiyahooda oo ay xilka ka qaadayaan. Xaaldo xasaasiya oo ka socda Garowe — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA Baarlamaanka Puntland oo fadhi deg deg ah loogu yeeray saaka & Gudoomiyahooda...
Baarlamaanka Puntland oo fadhi deg deg ah loogu yeeray saaka & Gudoomiyahooda oo ay xilka ka qaadayaan. Xaaldo xasaasiya oo ka socda Garowe
Garowe (Caasimadatimes)-2 saac kahor Xoghayaha guud ee baarlamaanka Puntland ayaa fariin qoraaleed u diray mudanayaasha baarlamaanka, oo uu ku wargalinayo in ay maanta oo ah 7da November iskugu yimaadaan kulankoodii caadiga ahaa, waxaana ay sheegeen in la baabiyey dhammaan fasaxii ay goluhu galeen mudada sadexda maalmood ee ay shalay lixda bisha isku raaceen guddoonka baarlamaanka.
Mooshin ka dhan ah gudoomiyaha golaha Wakiilada CabdiXakiim Dhooba-Daareed ayaa la sheegay in uu qabtay gudoomiye kuxigeenka 1aad ee baarlamaanka Puntland, waxaana la sheegay in saaka laga doodi doono.
Warar madax banaan ayaa sheegaya in guddoonka laftirkiisa ay Xukuumadu cadaadis ku saartay in meelmar laga dhigo doonista ah in mooshinka berri laga doodo.
“ ASC mudanayaal, waxaa lala socod-siinayaa mudanayaasha in uu jiro fadhigii golaha beri oo Khamiis ah kuna beegan 7 November 2019. Allaa mahadleh xoghayaha guud ee GW” ayaa lagu yiri qoraalka wargelinta ah ee uu xildhibaannada u diray xoghayaha Baarlamanka.
44 Xildhibaan ayaa magacyadooda lagu qoray warqad lagu baahiyey baraha bulshada, taas oo la sheegay in ay tahay mida rasmiga ah ee saxiixyada mooshinkan, waxaana ka muuqda xildhibaano katirsan baarlamaanka oo horey qaarkood u sheegayay in ay doonayaan in aysan isku milmin Haya’ddaha dawladda.
Ciidamo katirsan laamaha Ammaanka oo la rumeysan yahay in ay qeyb ka tahay Madaxtooyada ayaa weerar ku qaaday fiidnimadii xalay Aqalka Golaha Wakiilada, waxaana ka dhashay dagaalkaas dhimasho iyo dhaawac, iyadoo ciidamada Amniga baarlamaanka la doonayey in laga qaado.
Previous articleGudoomiye Dhoobo oo hada ku dhawaaqay war culus & Xaruntii Baarlamaanka Puntland oo uu sheegay in ay….
Next articleWAR DEGDEG AH:Ciidamo kusugnaa duleedka Badhan oo wada dhaqdhaqaaq ay kaga careysan yihiin Dagaalkii Garoowe.Sheegayna in ay Soo..
DEG DEG :Wararkii ugu dambeeyey qaraxii Gobolka banaadir Xalada Gudoomiye yariisow...
Sawirro: Al-Shabaab oo soo bandhigay Odayaashii soo dooratay Prof.Jawaari